Khabiirka Kala Duwan: Sida loo Joojiyo Spam Referral-ka ee ku dhacda Google Analytics
Inuu hubiyo in mid ka mid ah hufnaanta Google Analytics waa habka kaliya ee lagu hubiyo inololaha suuq-geynta oo loo isticmaalo ganacsi ama shakhsi ayaa ah mid wax ku ool ah iyo in websiteku uu u shaqaynayo sida la filayo. Si kastaba ha noqotee, geeddi-socodkaee lagu hagaajinayo Google Analytics, waxaa jira dhinacyo gaar ah oo hubinaya in ay saameyn ku yeelanayaan shaqada falanqaynta. Xawaaraha Spam waa buuqa ugu badansuuqyada - calcio balilla milano usato.
Igor Gamanenko, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka, wuxuu jeclaan lahaa inuu diiraddaada saaro feejignaantaas farsamo gudbinta farsamo ahaanwaxay ku dhacdaa labo qaab: marawaxada spam webka, iyo gawaarida gudbinta ee ruuxa:
Xayeysiinta Spam webka Inta badan waa hababka isdaba-joogga ah oo tusaya websaydh isku mid ahin Google sameeyo. Qaarkood waxay jecel yihiin Googlebot inay ogaadaan joogitaankooda, sidaas darteedna laga saaro warbixinta falanqaynta. Qaar kale oo aan keeninqiyaasta 100%
gudbinta Ruuxa Waxay soo diraan codsiyo been abuur ah oo HTTP ah oo leh awoodsameynta gudbinta spam. Waxay isku daraan gaadiidka sharciga ah laakiin ma booqan karaan website-ka laakiin xisaabtanka ugu dambeeya ee xisaabtanka.
Sababaha loo abuuro gudbinta spam
Dadku waxay u diri karaan gudbinta spamka website-ka sababo badan. Waxaa laga yaabaa inay ujeeddo tahayama aan ula kac ahayn. Sababaha mid ka mid ah sababaha loo gudbiyo spam ayaa ku soo galaya websaydhka waxaa ugu wacan barnaamijka caajiska ah. Barnaamijyada qaar ayaa ku fashilmay inay dhammaystiraankoodka bangiga, illaa ay ku fashilmeen inay si toos ah u aqoonsadaan. Horumarinta kale ee kale ma rabaan in ay yeeshaan xargaha gawaarida ahxayiray nidaamyada ay Google gasho..Sidaa daraadeed, iyagoo isbarbar dhigaya inay yihiin shabakad sharci ah oo sharci ah, waxay helayaan inay gaaraan goobta aan lahaynfaragelinta. Qaar kale oo ka mid ah farsamoyaqaannada waxay door bidaan in ay isticmaalaan gudbinta spam si ay u helaan cajiib ah ee dadka isticmaala ayna ku rakibaan qalabwareerka kombiyuutarkooda.Maadaama xiriiradaasi ay u muuqdaan kuwo si dhab ah u isticmaala dadka isticmaala, ma arkaan wax sabab ah oo iyaga ka shakisan.
Maxay xun yihiin?
Inta badan, gudbinta spam waxay faragelisaa xogta ay isticmaalaan Google Analytics,sidaas darteed soo bandhigo warbixinno xun. Joogitaankooda waxaa loola jeedaa u hoggaansamida wakhti ay ku cadeeyaan fadhiyada spam, kuwaas oo ganacsatada kale ay kharashka ku bixi karaansamaynta ujeedooyin wax soo saar oo ku saabsan goobta. Haddii aanad ogaanin in barta internetka ay dhab ahaantii xariifinayso gudbinta spam, mid ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco samaynta saboolkadoorashooyinka laga yaabo inay saameyn ku yeeshaan SEO-yada iyo darajada.
Ilaalinta diritaanka gudbinta spam
Marka mid ka mid ah cadeeyo dhibaatada suurtagalka ah ee ka imanaysa habka Google Analytics soo saartowarbixintooda, waxay isku dayi karaan inay ka soo saaraan tirakoobyada. Si kastaba ha noqotee, tani maahan hubin ah in aalladahan aan dib u soo noqon doonin.
Waa wax aad u fudud in la sameeyo tan haddii ay diiradda saarayaan in laga saaro kuwa aan la rabinGaadiidka baabuurta. Dhibaatooyinka saameeya internetka, marka ay timaaddo gudbinta spam, been abuur ah ee faylka ".htaccess". Dad badan oo bloggers ah ayaa soo jeedinayain shakhsiyaadka ay iskudeyn karaan faylka iyaga naftooda si ay uga takhalusaan gaadiidka aan loo baahneyn. Si kastaba ha ahaatee, waa fayl farsamo farsamo oo aad uga koobangoobo badan oo domain iyo dib u habeyn. Sidaa daraadeed, sameynta qalad sahlan oo aan caddaynayn waxa loo baahan yahay in la sameeyo, waxay lahaan kartaa dhibaatosaameyn ku yeelato bogga internetka. Way fiicantahay in la waayo khibrad horumarineed oo maareynaya faylka si ammaan ah.
Faylka .htaccess ayaa xakameyn kara dhammaan gawaarida, iyo taariikhda taariikhda ay ka soo galaan goobta.Si kastaba ha noqotee, dirxaha lafdhabarta ayaa u baahan kara dadaal badan. Qaybta ugu sarreysa ee Google Analytics ayaa halkan ku haboon, markaad isku deyeyso inaad ka baxdoxaalada ugu xun ee soo-gudbinta.